Uppdaterades 8 mar 2021 08:39
Gobollo badan ayaa talobixin xirashada af gashiga/af dhowrka leh. Wax dheeraad ah oo waxa shaqeynaaya ku sabsan ka akhri adiga gobolkaaga. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
In la isticmaalo af dhowre/af gashi
Soo xiro af dhowre/af gashi
Gacmaha dhaq ama isticmaal dawada jeermiska gacanta disha, sida tusaale ahaan isbiirtada gacanta.
Hubi in af dhowrahu/af gashigu isku dhan yahay oo uu nadiif yahay.
Af dhowre/af gashiga isagoo dhinaca saxda u jeeda kor saar sanka, afka iyo garka. Haddii uu af dhowrahu/af gashigu uu bir leeyahay ayay tahay in taas kor loo jeediyo. Xargaha laastikada waa in lagu soo xiraa dhagaha ama madaxa. Hubso inuu af dhowrahu/af gashigu si adag/aanay waxba soo galeynin ugu xiran yahay oo aanu daldalool jirin.
Ha taaban af dhowraha/af gashiga markaad xiran tahay.
Iska saar af dhowraha/af gashiga
Qabo xariga laastikada oo dhinac dhinac uga wareeji af dhowraha/af gashiga iyadoo aanad taaban af dhowraha/af gashiga intiisa kale.
Ku tuur meesha af dhowraha/af gashiga halka mar la isticmaalo loogu talogalay.
Af dhowraha/af gashiga la xiranaayo marka saxmad/ciriiri badan jiro iyo marka diyaarad lagu safraayo
Waxa jiri kara xaalado kale oo af dhowre/af gashi uu faa'iido yeelan karro, tusaale ahaan meel ay adag tahay in saxmad/ciriiri badan laga fogaado iyo xiriirka dhow oo muddo dheer socoday. Marka aad safrayso ayay tusaale ahaan imaan kartaa dalab/shuruud lagugu qasbaayo inaad af dhowre/af gashi xirnaato, tusaale ahaan garoomada diyaaradaha iyo diyaarada dhexdeeda.